$20M Eta hacked si agụghị oké ahazi Ethereum apps
Dị ka Chinese internet nche ike Qihoo 360 Netlab, hackers Ezuru $20 nde ke Eta si agụghị oké ahazi Ethereum Ngwuputa rigs na-atọ ndị ọzọ ngwa. Ndị ọkachamara na-na na ike na-ekwu na cyber ọgụ nwaa unsecured Ethereum ọnụ na Internet.
Kaadị Ngwuputa ụlọ ọrụ na-depụtara na London Stock Exchange
A ọhụrụ ụlọ ọrụ na-ahapụ ndị mmadụ m cryptocurrencies site ntị na kọmputa site na iji a na ndenye aha na ọrụ ka a mara ọkwa na atụmatụ depụta na London Stock Exchange, a mbụ maka mgbanwe.
Argo Blockchain kwuru na ọ na-enwe olileanya ịkpọlite ​​£ 20 nde ke ndepụta na-atụ anya ka a kpọrọ na gburugburu £ 40 nde. Argo ekwu, ọ ga na-akpa na kaadị Ngwuputa ụlọ ọrụ isonyere London si ngwaahịa ahịa.
Financial ọrụ ụlọ ọrụ na-emefu $ 1.7B on blockchain
The ego ọrụ ụlọ ọrụ na-emefu $1.7 ijeri kwa afọ na-ekesa ledgers, dị ka na-eme nnyocha Greenwich Associates.
The ọmụmụ na-egosi na Amawaputala nọrọ na blockchain ụba 67% afọ gara aga, na otu na 10 mmiri na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-akọ na emefu ngafe nke $10 nde. N'otu aka ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ blockchain atumatu okpukpu abụọ ikpeazụ afọ.
Richard Johnson, osote onyeisi oche nke Greenwich Associates Market Structure and Technology kwuru ihe karịrị atọ-ebe nke oru ngo na-ugbu n'okpuru mmepe na-atụ anya na-aga ndụ n'ime afọ abụọ.
CFTC akpọ maka kaadị mgbanwe ịkọrọ trading data
The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ka ịrịọ na ọtụtụ kaadị ego mgbanwe – Bitstamp, Coinbase, itBit na Kraken – mgbanwe trading data iji chọpụta ma mkpachapụ na-na-emetụta ndị kaadị ahịa.
Ezie na CFTC si nchoputa bụ ka na nzọụkwụ mbụ, ọ na-egosi na regulators nwere oké mmasị na-etinye kaadị mgbanwe n'okpuru ya na-elekọta. Ọ kachasị, na CFTC na-ikpọ ma ndị ahịa na-emetụta trading ihe ndị dị ka spoofing ma ọ bụ ma na-azụ ahịa na-abanye n'ime isi wuru price na-abawanye.
Korean anoghi n'ulo oba-eme atụmatụ iji blockchain iji nyochaa ahịa ID nke
A mba ichekwa ego na bank otu na South Korea na-ezube tụgharịa a blockchain dabeere ID nkwenye usoro anụ ụlọ azụmahịa mmiri.
The ọhụrụ usoro, BankSign, ga-enye obodo mmiri otu nhọrọ iji dochie ẹdude ID nkwenye usoro na anọwo na ebe ruo ọtụtụ iri afọ na South Korea.
The ọhụrụ blockchain ID ọrụ, nke ga-abụ maka ma online na mobile ụlọ akụ, n'egosi otu n'ime ndị mbụ mgbalị site azụmahịa anoghi n'ulo oba South Korea mee blockchain ngwa maka n'ozuzu na-eji ọkụ.
Kraken Daily Market Report maka 11.06.2018
$212M ahịa gafee ahịa niile taa
Bank of Canada anyị ...
July 19, 2018 na 5:14 PM
Riley Doig kwuru: